Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Network Tourism Network Bangladesh Isi ndu & gbado anya
Akụkọ gbasara Bangladesh • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Ndi akuko • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ewebatala otu ndị na -ahụ maka mmasị na njem nlegharị anya nke ụwa na Malaysia, Balkans, Saudi Arabia, Africa na ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ. A na -aja ndị otu mmasị mma na otu ndị isi na -ejikwa ihe ọ bụla site na ụgbọ elu ruo ọbịa, ruo udo site na njem. Isi ọhụrụ e guzobere na Bangladesh na -eweta ahụmịhe na onye ndu na ngwakọta nke nzukọ ọhụrụ a.
The Network Njem Nleta Ụwa kwuputara nguzobe nke Bangladesh Interest Group/Chapter n'okpuru onye isi HM Hakim Ali.
Site na ndị nwere mmasị, World Tourism Network (WTN) na -enye ndị otu ya nnukwu olu mpaghara, ebe n'otu oge ahụ gụnyere olu mpaghara a na ikpo okwu zuru ụwa ọnụ.
WTN bidoro iwughari. njem mkparịta ụka na Machị 2020 ma na-etolite dị ka mmekorita nkeonwe na nke ọha na-anọchite anya ọtụtụ azụmaahịa na obere obere na mba 127.
Bangladesh, n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ India na Bay nke Bengal, bụ mba Ndịda Eshia nke ahịhịa ndụ juru na ọtụtụ ụzọ mmiri mara. Osimiri Padma ya (Ganges), Meghna, na Jamuna na -emepụta ala dị larịị, na njem ụgbọ mmiri bụ ihe a na -ahụkarị. N'ebe ndịda n'ụsọ oké osimiri, Sundarbans, nnukwu oke osisi mangrove na -ekerịta na Eastern India, bụ ebe Royal Bengal agụ.
Ruo mgbe ntiwapụ nke COVID-19 na Machị 2020, njem nlegharị anya abụrụla ihe siri ike yana otu akụkụ kacha baa uru maka akụ na ụba ụwa yana ọtụtụ mba na-emepe emepe dị ka Bangladesh.
Bangladesh nwere ọtụtụ ebe eke, ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, ihe mgbe ochie, okpukperechi, na ebe ndị mmadụ mere njem nlegharị anya. Site na ịga na obodo a, mmadụ nwere ohere ịmata ndị agbụrụ na omenala, omenala, nri, na anụ ọhịa dị iche iche. Ndị njem nleta nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe omume dị iche iche metụtara njem nlegharị anya dịka ịgba mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, ịga njem, ịkwọ ụgbọ mmiri, ịnya ụgbọ mmiri, ịsa ahụ n'oké osimiri, wdg.
A na -ahụta na njem nlegharị anya na -eto eto maka ọtụtụ mba na -emepe emepe. Ọ na -arụ ọrụ dị mkpa ozugbo na n'ụzọ na -abawanye na ọnụego GDP nke Bangladesh site na imepụta ohere ọrụ ọhụrụ maka ma nwoke ma nwanyị, na -ebelata ịda ogbenye, na -akwalite isonye na mpaghara, na -enweta ego mba ofesi site na ndị njem si mba ofesi, na -emezi ụkpụrụ akụ na ụba nke ndị obodo. ndị mmadụ na akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Njem nlegharị anya Bangladesh
Network Tourism Network bụ olu ogologo oge nke obere njem na obere azụmaahịa na azụmaahịa gburugburu ụwa. Site na ijikọ mbọ, WTN na-ebute ụzọ na mkpa na ebumnuche nke obere azụmaahịa na obere yana ndị nke ha.
Ọtụtụ ndị nọ na Bangladesh na -ekwu na Maazị HM Hakim Ali bụ onye guzobere ụlọ ọrụ njem na Bangladesh. Ọ rụọla ọrụ dị ka Onye isi oche nke Bangladesh International Hotel Association.
Na nkwupụta mgbasa ozi taa, Network Tourism Network nwere obi ụtọ ịkpọsa nhọpụta nke Maazị HM Hakim Ali ga -eduzi WTN ọhụrụ Otu mmasị Bangladesh.
Juergen Steinmetz, onye isi oche, WTN
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz kwuru, sị: “Mgbe m gara Bangladesh, ahụla m ikike ụlọ ọrụ njem na ndị njem ma ghọta mmetụta akụ na ụba na mba ahụ. Anyị nwere olile anya na ndị otu mmasị ọhụrụ anyị, yana Maazị Ali dị ka onye ndu, ga-enwe nnukwu mgbanwe n'ịgbagharị ụlọ ọrụ njem na Bangladesh site n'oké ifufe nke COVID-19.
Azụmaahịa dị obere ma ọ bụ obere na-arụ ọrụ dị mkpa na Bangladesh, WTN dịkwa njikere ịnọnyere Maazi Ali na kọmitii ya mara mma nke ndị njem na ndị njem njem Bangladesh. "
HM Hakim Ali, Onye isi oche, WTN Isi Bangladesh
Onye isi ala WTN Bangladesh HM Hakim Ali, onye bụkwa onye nwe ya Hotel Agrabad Ltd.., kwupụtara kọmitii ya nke nwere mmadụ iri na atọ.
Site n'ịchịkọta ndị otu na ndị ọrụ ọha na mpaghara na mpaghara ụwa, WTN abụghị naanị na -akwado ndị otu ya kama ọ na -enye ha olu na nzukọ ndị njem.
Site na isoro ndi ochichi na ndi njem na ndi isi ochichi na-arusi oru, WTN choro imeputa uzo ohuru iji tinye onu ogugu ndi njem njem ma nye aka njem obere njem na njem nleta n'oge di nma ma di egwu.
Ọ bụ ebumnuche WTN inye ndị otu ya nnukwu olu mpaghara ma n’otu oge ịnye ha ihe n’eluigwe.
WTN na-enye olu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmaahịa bara uru maka obere azụmaahịa na obere ma na-enye ọzụzụ, ndụmọdụ na ohere agụmakwụkwọ.
"Iwughachi njem”Mbido bụ mkparịta ụka, mgbanwe echiche, na ihe ngosi maka omume kacha mma nke ndị otu anyị nọ n'ihe karịrị mba 120.
The “Dike” Award na-amata ndị na-aga njem ndị ọzọ na-eje ozi na ndị njem na ndị njem na obodo mana anaghị eleghara anya.
The "Nchekwa njem nlegharị anya”Na -enye ndị ọrụ anyị na ebe anyị na -aga ebe ikpo okwu iji gosi na ha dị njikere ịmalitegharị njem nlegharị anya n'enweghị nsogbu.
Iji mezuo ebumnuche ndị a, WTN na -agba ume iguzobe otu ndị nwere mmasị, gụnyere isi mpaghara, nke ga -enwe ike lebara nsogbu mpaghara na ụwa niile anya na ntọala mpaghara na nke ụwa.
Isi nke WTN Bangladesh
HM Hakim Ali - Onye isi ala
MN Karim - osote onye isi ala
Mehedi Amin - osote onye isi ala
Syed Ghulam Qadir - odeakwụkwọ ukwu
Taslim Amin Shovon - Jt. Odeakwụkwọ ukwu
Ariful Haque - Onye isi
Isi ụlọ ọrụ WTN dị na Honolulu, USA. https://wtn.travel/ https://wtn.travel